၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၂ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် ဖင်လန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Ms. Nina Irmeli Vaskunlahti ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ၁၃:၃၀ နာရီအချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအား ၁၅:၀၀ နာရီအချိန် တွင်လည်းကောင်း နေပြည်တော်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး H.E. Ms. Nina Irmeli Vaskunlahti ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး နှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖင်လန်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အစီအစဉ်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ Clean and Smart Energy ဆိုင်ရာ နည်းပညာများနှင့် အတွေ့အကြုံများမျှဝေရန်၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမှ ရေရှည်တည်တံ့စေမည့်နည်းလမ်း များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်၊ သယ်ပို့၊ ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချေးငွေ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး၊ ပို့လွှတ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် မည့်ကိစ္စရပ်များအား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၎င်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Alexander C.Feldman နှင့် အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် အမေရိကန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲများသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ တက်ရောက် ခဲ့ကြ ပါသည်။